सञ्चारमन्त्रीको टिप्पणी : रअ प्रमुखलाई भेटेर कोहीपनि रअ पक्षधर त हुँदैन होला नि ! – kalikadainik.com
सञ्चारमन्त्रीको टिप्पणी : रअ प्रमुखलाई भेटेर कोहीपनि रअ पक्षधर त हुँदैन होला नि !
बिहिबार, साउन ०९, २०७६ | १९:१५:२१ |
काठमाडौं । गएको शनिबार नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विंग (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नभेटेको सरकार प्रवक्ता सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन्। बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बास्कोटाले प्रधानमन्त्री ओली र गोयलबीच भेट भएको भन्ने विषयको खण्डन गरेका हुन्।
उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छैन । आएको हो र भेटेको हो भने पनि प्रचलित डिप्लोमेटिक प्रोटेकलकै आधारमा भेटघाटहरु हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभएको छैन । यो र्युमर क्रियट गर्ने काम नगरौं। क कस्ले भेट्नुभयो हामीलाई थाहा पनि छैन । भेट्नै हुँदैनथ्यो । हामीलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन । तर म दावाका साथ भन्छु प्रधानमन्त्री भेटघाट भए जस्तो, भेटे जस्तो, भेटेकै जस्तो मलाई लाग्दैन।’
उनले भने, ‘को कस्ले भेटे ? को कस्लाई त्यस्ता भेटघाट गर्ने बानी लाग्या छ ? रअको प्रमुखलाई भेटेर कोही पनि रअको पक्षधर त हँुदैन होला नि ! हुन्छ र ? यस्तो लघुताभाषी मान्यता पनि नराखौँ र प्रधानमन्त्रीले भेटेको होइन । भेटेकै हो भनेर कसैलाई पुष्टि गर्नु छ भने तथ्य प्रमाण लिएर पुष्टि गर्नुपर्यो । नेपाल सुन्दर देश छ आइरहन्छन नि मान्छेहरु।’
उनले भने, ‘म हाजिरी जवाफमा सामेल छैन । मैले डिप्लोमेटिक प्राटोकल अनुरुप भए राम्रो हुन्छ । भनेर भनीसकेँ । भेट्या नभेट्या पनि मलाई थाहा छैन।’
रअ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाईसमेत भेट गरेको चर्चा भएको थियो। यद्यपी कसैले पनि सो भेट भएको विषय स्वीकार भने गरेका छैनन्।
पत्रकार सम्मेलनमा साउन ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।